Chemical Aha: Chlorine dioxide Otu akụrụngwa ntụ ntụ.
Njirimara: chlorine dioxide Otu akụrụngwa ntụ ntụ bụ transportable, na-abụghị ihe mgbawa ntụ nke otu mmiri na, ozugbo agbakwunye na otu olu mmiri, na-eme n'ụzọ zuru ezu n'ime ihe ngwọta chlorine dioxide na-adịgide adịgide.
Chemical Aha: Chlorine dioxide Powder Kit / chlorine dioxide ngwa abuo abuo
Njirimara: Chlorine dioxide ihe ngwugwu abuo abuo bu ihe eji ebughari, nke na-adighi ihe mgbawa nke ihe abuo nke, mgbe agbakwunyere olu mmiri, na-eme ihe zuru oke n'ime ihe ngwọta chlorine dioxide na-adịgide adịgide
Chlorine dioxide (ClO2) Sachets bụ chlorine dioxide nnyefe ngwaahịa gị maka iji ya dị ka deodorizer. A na-etinye ntụ ntụ ahụ kpọmkwem na sachets. Mgbe ị na-agba mmiri na sachets, sachets na-emepụta chlorine dioxide gas iji bibie isi na-adịghị mma na achọghị na isi mmalite ha. Ọ ka mma maka ebe dịpụrụ adịpụ dị mkpa yana ihe achọrọ iji wepụ isi ọsọ ọsọ. Enwere ike iwepụta gas kpamkpam na 20 ruo 30 awa.
Gel na Gel bụ chlorine dioxide dabere, ihe eji enyere mmadụ aka ịhapụ ya. Ọ gụnyere otu akpa ntụ na karama na-atọhapụ. Naanị tinye ntụ ntụ n'ime mmiri na karama na-atọhapụ, ọtụtụ nkeji mgbe e mesịrị, gel guzobere. Mgbe ahụ, Ọ na-amalite ịhapụ gas chlorine dioxide na gburugburu ebe obibi. Enwere ike iji Gel dị ka ihe nhicha ikuku na ihe ndozi maka isi na nchịkwa ndu na oghere dịpụrụ adịpụ, dịka ụgbọ ala, friji, friza, ụlọ, ọfịs, ọba akwụkwọ, ime ụlọ ịwụ, ụlọ nchekwa na ihe ndị ọzọ.
Main mgwa na ego nke ọdịnaya: ClO2 (6g)
Dị onunu ogwu: Jel
Ụbọchị mmebi: Ọnwa 1-2 meghere.
Ihe: Magnesia≥ 98.5%
Nha: ụdị dị iche iche na nha
Ojiji: nnwale oku, mgbaze ọla edo, nnwale ọla di oke onu ahia
Ihe: Alumina Efere, Alumina Efere, Clay
Nha: 20g / 30g / 40g / 45g / 50g / 55g / 65g / 75g
Product aha: Potassium Persulphate
Ọdịdị: crystalline ntụ ntụ
EINECS Mba: 231-781-8
Usoro Molekụl: K2S2O8
HS Usoro: 28334000